Multivarka Brand 502 ingenye models ethandwa kakhulu, okuyinto ukhetha inombolo enkulu abathengi, njengoba kufakazelwa izimpendulo zabo. Yiziphi izici lo mkhiqizo futhi kanjani kahle ukuyisebenzisa? Yilokhu esikubiza ukuchaza ngokuningiliziwe ngezansi.
esiphezulu amandla ezingeni enqubeni ukupheka 850 Watts. Multivarki isitsha has a umthamo 5 amalitha.
Indaba for the wetetindlu plastic. Ngo iqoqo ne nemishini ekhishini kuyinto spoon for irayisi, isobho, inkomishi wokulinganisa, lo engenhla nengezansi ingcindezi cooker, kanye nokuqoqwa, okuyinto has zokupheka Brand 502 Multivarki.
Multivarki isici sale ukuthi ifakwe ezintathu Ukushisa izakhi: main (ngezansi), phakathi, futhi ikhava. Ilungiselelo elinjalo inikeza indlela ekhethekile elifudumele-up, ngakho izitsha uzilungiselele ngokushesha futhi ethubeni lokudla okumnandi kakhulu futhi namanzi.
Insimbi siyavunyelwa iminyaka emibili.
Multivarka Brand 502, intengo zazo kuhluka 5 kuya kwezingu-7, utholwa yibo abathengi. Phakathi izimpahla zalo mkhakha intengo ingenye okukhethwa best.
Imishini unetinhlelo eziyishumi, kuhlanganise: ukulungiswa okusanhlamvu (ezinguqulweni eziningana), iphalishi yobisi, isitshulu, yogurt okuzenzela, isobho, ukubhaka, kushunqe futhi ukuthosa, Ukushisa kanye imodi ibhukwana.
Ngokuvamile, ngokuvumelana kumpendulo yekhasimende, iyunithi Kulula ngokwanele ukuba ayisebenzise. Zonke imiyalo ziboniswa ngesiRashiya, inkinobho yemenyu, uqale ukupheka futhi ukuqedwa kwayo, kanye nabanye. Ungene. Ibonakala isikhathi isibonisi Imodi ezikhethiwe kanye nazo zonke izinqubo.
Uma umsebenzisi iqala ukupheka uqale multivarka iqala countdown. Special amasignali umsindo ukuphakamisa izinyathelo ezifanele. Futhi ngosizo kubo ungakwazi ukuthola mayelana isiqalo ekupheleni ukupheka. Zonke izindlela babe ukukhanya yabo.
Kukhona isiqalo ilibele zohlelo ukupheka (kufika ku amaningi njengoba amabili nane amahora!), Kodwa akusebenzi uma uqala ukupheka nokushisisa kukho, kanye uhlelo inhlukano control.
Multivarka Brand 502: imanyuwali yomsebenzisi
Ngezansi uzothola ulwazi mayelana nendlela walala kahle imikhiqizo idivayisi. Ubulula kuqinisekisa ukuthi izibani inkomba kanye amasignali umsindo, kanye nemishini ngokwanele ephelele amadivayisi eyengeziwe, okuyinto ifakwe multivarka Brand 502. Umhlahlandlela kuhlanganisa jikelele Umhlahlandlela isicelo, kanye imodi ukupheka ngalinye ngokuhlukile.
ISIBONELO amathebhu ziboniswe ku irayisi groats.
Kuyadingeka ukuze kukalwe kwesokudla umkhiqizo, ugeze khona futhi indawo Multivarki umthamo (ngabe yikuphi hhayi ukugeza ngqo inkomishi ekhethekile, kungenjalo kungenzeka lilimele enamathela kokuba non stick izakhiwo).
Okulandelayo, hlanganisa amanzi (ngaphakathi ezindongeni esitsheni nge imigqa emitheni lamanzi Izinga ukupheka efanele). Ukulinganisa kangakanani-ke kuyodingeka usebenzise isikali "indebe", lapho kukhona uphawu nge ngezabelo. Ngokwesibonelo, ezine izinkomishi irayisi kudingeka uthele amanzi ezingeni kuyakuba khona izimbizana ezine. Okungenani - beakers ezimbili. Uma lokhu inani lamanzi kanye nokusanhlamvu kunokuba kube ayikwazi ukuba ngaphezulu kuka ezingeni esiphezulu.
Sula izindonga phansi isitsha ukoma futhi ngokucophelela beka ngaphakathi endaweni ebiyelwe, sengiphendukile ukuze loxhumana iqiniswe Ukushisa izingxenye kagesi.
Khona-ke kumelwe uvale lid uvalwe.
Ngemva kwalokho kudingeka ukuxhuma kwi-amapayipi multivarku.
Isibonisi kufanele avele "88,88", futhi izibani - zikhanyise.
Khona-ke idivayisi likhipha umsindo ekhethekile. Izinkomba kufanele siphume inkinobho yokwenza kwimodi yokulinda.
Ngaphezu kwalokho, umsebenzisi angakwazi oyifisayo multivarku ohlelweni oyifunayo.
Indlela ukhethe umsebenzi ukupheka?
Chofoza le "Imenyu" bese sithathe isicelo edingekayo. Imodi zamanje oyosisiza isibonisi kwasemuva. ukuqala inkinobho ngesikhathi esifanayo kufanele zikhanyise. Uma wenze ukukhethwa sokugcina imodi ukupheka, kubalulekile ukuba chofoza kukho. Esimweni lapho multivarka waqala ukusebenza, le nkomba yokhiye ovuthayo kancane.
"Krupa" Imodi (Express ne Standard)
Uhlelo ekuqaleni kuyinto okuzenzakalelayo. Ngokuchofoza inkinobho Izilungiselelo ezithuthukisiwe, umsebenzisi angakhetha ukufakwa ngqo. Phakathi naleyo nqubo babe izindlela express, standard nokupheka pilaf.
Esimweni sokuqala kubalulekile ukuba uthele iqolo esitsheni amanzi kuze kube seqophelweni oyifunayo uthele. Okulandelayo, kufanele ucindezele inkinobho "Imenyu" bese ukhetha okukhethwa kukho ukupheka okusanhlamvu. Kudivayisi hamba ngokuzenzakalela ku Uhlelo Express (lapha, isikhathi incike inani imikhiqizo). Ochwepheshe ukweluleka ukusebenzisa kule modi ukupheka udali kanye nokunye okufana nokolweni.
I "ejwayelekile" ihlukile kuphela ukuthi countdown kungaqali kumaminithi 4 (njengoba ohlelweni okusheshayo), futhi 9. Kungcono ukuyisebenzisela ukupheka irayisi iphalishi namabele.
"Pilaf" Imodi multivarka Brand 502
Kufanele Fry imifino nenyama. Sidinga uthele namafutha amancane umthamo iyunithi. Khona-ke ungakwazi ukwengeza imikhiqizo. Ngemva kwalokho, uthele irayisi bese zifaka kuyasifanelekela amanzi (isilinganiso 1 kuya 1). Khetha ngokucindezela imodi ngenhla kulungiselelwa groats izinkinobho.
Uhlelo "pilaf" Kufanele ucacise izilungiselelo ezithuthukile.
Le modi Kunconywa Fry imifino, inhlanzi noma inyama. Sidinga uthele amafutha kancane esitsheni bese ukhetha uhlelo ofuna ku imenyu. Kuyoba ngokuzenzakalela Ukusetha isikhathi e-20., Kodwa uma kunesidingo, ungashintsha it (cindezela ku "imiz." Futhi ibonisa kanjani hushazela it fuza ezinhlanu kuya imizuzu abayikhulu namashumi amabili, bese ucindezela inkinobho isiqalo).
Lapho amafutha sekuqala ukufudumala ezansi indebe, kungenziwa wabeka ukuze izithako ukuthi udinga Fry. Ikhava ingaqhubeka evulekile. Qiniseka ukuthi ushukumisa ukudla ngesikhathi ukupheka.
Uhlelo lingasethwa ngokuzimela kuya 5 izigaba ukupheka nge ezahlukene lokushisa izici isikhathi. Ngakho, Ukushisa kungaba ukwehla kancane kancane noma okusheshayo kancane kancane. Amazinga kungenzeka uhla kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili nanhlanu kuya elikhulu elinamanci mathathu ngamadigrizi (lesi sikhathi kuba degrees emihlanu).
Uhlelo ukulungiswa yogurt
Kuyadingeka ukuba ugcwalise ethangini ubisi multivarku eduze. Uma udinga ukuba nithele umkhiqizo, ungafaki amalitha angaphezu kwamabili, njengoba kungaba sinyuke enqubeni.
ngokwenza uhlelo yogurt kuboniswe kwimenyu. Ihlelwe ngokuzenzekelayo ukungabi khona inqubo ubisi abilayo. Uma kudingekile, uma kufanele kwenziwe, kufanele ukhethe Reflux ukuze uthole izilungiselelo ezengeziwe.
Uma ubisi hhayi ebilisiwe, uzozwa umsindo ekhethekile lapho lokushisa 37 kuya 40 (njengoba in abilayo, kodwa kukhona namanje okuzokwenzeka futhi uma epholisa).
Isikhathi kudingeka lingasethwa usebenzisa izinkinobho ohambelana. Kulokhu lapha zihlanganisa kokubili abilayo kanye nokupholisa. Ngakho-ke, uma unika amandla idivayisi 8 amahora ukupheka yogurt okuzenzela, ulungele kuyoba ingqikithi yamahora angu-6, futhi lonke ubisi kuyobilisa epholile.
Inani ngempela isikhathi ayikwazi ukusethwa uma sicabangela izakhiwo ezahlukene imikhiqizo probiotic.
Lapho ufika izinga lokushisa oyifunayo udinga ucindezele inkinobho isiqalo, bese ngilanda ukuthoma ukubala phansi isikhathi.
Uma uzwa elinye umsindo, kungaba buhlanjululwe in imikhiqizo yobisi, probiotic. Lokhu kuzokwenzeka uma izinga lokushisa ubisi ukufinyelela kusuka degrees 38 kuya 40.
ukupheka hlelo ukuze umbhangqwana
Kuyadingeka ukuba uthele amanzi ethangini lisebenze, usethe esinye yamalahle. Ukudla kufanele ufakwe kukho kubo. Khona-ke udinga izinto ziyimfihlo zedivayisi, chofoza imenyu bese uvula uhlelo yokupheka ukuze umbhangqwana. Isibonisi ubonisa ngokuzenzakalelayo isikhathi kumaminithi amabili. ke kungashintshwa usebenzisa timer.
Cindezela inkinobho isiqalo, bese idivayisi izosebenza, njengoba kungaqondakala ngumuntu inkomba ovuthayo eceleni kwakhe.
Uhlelo isobho zokupheka
Kule modi, ungakwazi ukupheka ezihlukahlukene izifundo zokuqala. Kuyinto efanelekayo ukupheka isobho, rassolnik noma halophytes, borscht, nokunye. D.
Beka zonke izithako iyunithi esitsheni. Ngalesosikhathi thela eliningi oyifunayo yamanzi (esingeqile uphawu esiphezulu lapho uphezu kwakho konke kulesi silinganiso Multivarki ngaphakathi isitsha).
Esikhathini imenyu, ukhethe isobho Uhlelo ukupheka. Isikrini ngokuzenzakalelayo ukuboniswa phakathi ihora nemizuzu engu amathathu. Lapho izinkinobho timer ungakwazi ukushintsha izilungiselelo ezizenzakalelayo.
Okulandelayo udinga uchofoze Qala ke kufanele uqale isobho countdown ukupheka. Ngaphakathi Multivarki konke kufanele ubilise. Khona-ke umsebenzi Ukushisa kukhutshaziwe, futhi emva kwemizuzu eyishumi nanhlanu ukufundwa lokushisa izomashela ezingeni degrees ayisishiyagalolunye.
Ngemva kwalokho, yonke into ngaphakathi Multivarki futhi amathumba. Ngemva kwenye imizuzu eyishumi nanhlanu, izinga lokushisa lehla degrees ayisishiyagalolunye. It kuzophindwa ngemva kwesikhathi esithile sesikhathi.
Kulolu hlelo ungakwazi walala inqubo ukupheka izithako.
Multivarka 502 Brand: Izibuyekezo
I umbono amakhasimende mayelana izinga kwalo mkhiqizo, esikhathini esiningi, omuhle.
Ngakho, ngokuvumelana ukubuyekezwa, idivayisi has uhlelo ezihlukahlukene izidingo, ukuze ukwazi ukulungisa njengoba umkhiqizo wezokudla, gazinga ubhake nobisi ngamathumba iphalishi. Uma udinga ukwenza okuthile okukhethekile, futhi iresiphi kulokhu kubenzima futhi kufanele abonise lokushisa ezahlukene inqubo, ungasebenzisa imodi ibhukwana (kukuvumela ehlelweni ngokwakho izigaba ezinhlanu phakathi ukupheka, ne okushisa ahlukene azosethwa).
Abaningi aveze ukuthi multivarka Brand 502 - lena ukuthenga enkulu uma umthengi ukuthandwa pilaf. Kwimodi manual kungenzeka ngesikhathi oyifunayo ukuthosa lokushisa kwenyama enezinga imifino, ukupheka irayisi oluthile lokudla kanye t. D.
Ochwepheshe uqaphele ukuthi idivayisi interface ingenye kuyaqondakala kakhulu umsebenzisi isilinganiso ngokuhambisana sokuhlola.
Imibhalo Eqoshiwe ziboniswa ukuphrinta Russian ezinkulu. Futhi, bona ziqokonyiswe umbala obomvu elingeza lula uma usebenzisa idivaysi.
Bowl ngoba Multivarki ubukeka okuqinile nokuphelele ngale. Ifomu ngezansi enamathela iyunithi libukeka ayikhekheba lezinyosi, + ngakho konke ukushisa ngokulinganayo basakaza. Cover ngaphakathi angasuswa, yingakho ukunakekelwa impela nje inqubo kalula.
Futhi e ukubuyekeza, idatha zivame kakhulu wathola ukuthi idivaysi ingasetshenziswa isikhathi eside.
Nokho, zikhona nemiphumela ethile engathandeki ukuthi, ngokwendlela abathengi, has multivarka Brand 502. E3 iphutha zingaboniswa kudivayisi ukubonisa uma siphukile lokushisa inzwa. Lokhu ukwehluleka ekukhathaza abasebenzisi eziningi. Kodwa lokhu kwehluleka ekhishiwe kalula, futhi akuyona njengoba kuvamile.
Uma sisusela kulokho angapheka Meatless Burgers?